Ego mmefu ego ezumike na ntụrụndụ oge ezumike gafere na ngụkọta ijeri $ 1.5 na Q2 2021
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Njem azụmahịa » Ego mmefu ego ezumike na ntụrụndụ oge ezumike gafere na ngụkọta ijeri $ 1.5 na Q2 2021
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • investments • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • News • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
N'iji ọnụ ahịa azụmaahịa gafere ókèala na mpaghara dị iche iche nke ụwa, Europe nwere ọkwa kachasị elu, yana mkpokọta azụmahịa ekwuputara ruru $ 1billion n'oge ahụ.
Ego mmefu ego $ 650 nke FlixMobility bụ ndepụta kachasị elu.
Germany butere ndepụta ahụ n'ihe banyere ọnụ ahịa azụmahịa na nde $ 745.23.
Obodo kacha elu n'ihe gbasara ọrụ mmefu ego na -agafe agafe na Q2 2021 bụ France.
Mkpokọta njem na ntụrụndụ na -agafe ego mmefu ego nke ọnụ ahịa ruru $ 1.5bn n'ụwa niile na Q2 2021, nke nkwado $ 650m nke FlixMobility.
Ọnụ ahịa ahụ gosipụtara mmụba nke 421.4% karịa nkeji iri na ise gara aga yana ịrị elu nke 509.4% ma e jiri ya tụnyere nkezi nkeji anọ nke ikpeazụ, nke guzoro na $ 242.88m.
N'iji ọnụ ahịa azụmaahịa gafere ókèala na mpaghara dị iche iche nke ụwa, Europe nwere ọkwa kachasị elu, yana mkpokọta azụmahịa mara ọkwa ruru $ 1bn n'oge ahụ. Na ọkwa obodo, Germany kacha elu ndepụta ahụ na ọnụ ahịa azụmaahịa na $ 745.23m.
N'ihe banyere mpịakọta, Europe pụtara dị ka mpaghara kachasị maka njem nlegharị anya & ụlọ ọrụ ntụrụndụ na-agafe ego na-akwado oke azụmahịa na mba ụwa, Asia-Pacific na-esote North America.
Mba kachasị elu n'ihe gbasara ọrụ mmefu ego na -agafe agafe na Q2 2021 bụ France nwere nkwekọrịta atọ, Germany sochiri ya na India nwere atọ.
Na 2021, na njedebe, a na -ekwupụta azụmahịa mmefu ego gafere ókèala ruru $ 1.5bn n'ụwa niile na njem nlegharị anya & ntụrụndụ, na -egosi akara mbelata nke 243.1% n'afọ n'afọ.